बलिवुड जगतका चर्चित एवम् सुपर स्टार अभिनेता सलमान खानलाई नचिन्ने कमै होला । जहिले पनि युवाहरुका लागि उदाहरणको रुपमा बन्दै गएका सलमान खान र कैटरिना कैफको प्रेम सम्बन्धको बारेमा पनि धेरै चर्चा भएकै हो । कहिले प्रेम त कहिले विछोडका कुराहरु पनि
ज्योतिको मगरको जवानीको तेल यस्तो छ । हेर्नुस कसरी लस लस गर्दैछ ।
शंकर अधिकारी घायलको निर्देशनमा एक पृथक भिडियो रिलिज भएको छ। केहि फरक लोकेसन अनि फरक प्रस्तुति मस दुर्गेस थापा र चन्दा दहाल लाइ प्रसुत गरिएको छ भने यसै गित मार्फत दिल थापा रजतपटमा प्रवेश गरेकाछ्न। सन्ध्या म्युजिक को प्रस्तुति मा राजेन्द्र
प्रेमिका संग भागे “टाईगर श्राफ”
बलिवुडमा अहिले जल्दो बल्दो र सुपर स्टारको रुपमा चीर परिचित अभिनेता टाईगर श्राफ फिल्म जगतमा जम्न सफल भएका छन् । उनले अभिनय गरेका फिल्महरु प्रायः सबै हिट नै हिट भएको छ । केही महिना अघि मात्र फिल्म बागीबाट टाईगर श्राफले नाम कमाउन सफल भएको छ ।
यो दिन हुंदैछ सलमान खानको बिहे
बलिवुडका दबंग खान, सुपर स्टार सलमान खानको विहेको लागि जो कोही पनि सोध्ने गरेको छ र उदाहरण पनि बन्ने गरेको छ । तर सलमान खानको विहे भने पक्का भइसकेको अवस्था छ । सलमान खान आफनो विहेलाई लिएर प्रायः चर्चामा रहदै आएको छ । सलमान खान अहिले आफनो
बबी देओल बने डिजे, भयो बेज्जती
बबी देओललाई नायकको रुपमा सबैले चिन्नुभएकै होला तर के तपाईंलाई थाहा छ, उनी अहिले डिजे बनिसकेका छन् । आफूभित्र लुकेको डिजेको यही प्रतिभालाई उजागर गर्ने उद्देश्यसहित बबी देवल दिल्लीको एक क्लबमा गए । तर उनको यो प्रतिभाले मानिसहरु ऊर्जावान् बनाए
चर्चित हिरो को हो भन्ने विषयमा झगडा हुदा एकको मृत्यु
तेलेगु नायक जुनियर एनटीआरका एक प्रशंसकले पवन कल्याणका समर्थकको हत्या गरेका छन् । आइतबार कर्नाटकको कोलारमा साउथ हिरोमा को हिट भन्ने विषयमा झगडा हु“दा एकको मृत्यु भएको हो । घटनापश्चात् कल्याण तिरुपतीबाट विशेष विमानमार्फत सोमबार हैदराबाद पुगेक
रियलको “माधवी भाभी” यस्तो हैट
सब टि.भि. को चर्चित र अति लोकप्रिय टिभि सो “तारक मेहताका उल्टा चश्मा” सिरियल नहेर्ने र मन नपराउने पनि कमै होला । तारक मेहताका उल्टा चश्माको २ हजार बढी एपिसोड पुरा भइसकेको छ । यस सिरीयलका अभिनयकर्ताहरुले दर्शकको मनमा आफनो जग्गा बनाउन सफल
फिल्म “रुस्तम” को मिस्ट्र सब भन्दा अगल
बलिवुडका रियल सुपर स्टार तथा खेलाडी ब्याय अक्षय कुमारको फिल्म “रुस्तम” को बारेमा जो कोही पनि जान्नका लागि उत्सुकता प्रकट गरिरहेका छन् । अक्षय कुमार फयानहरु अक्षयका फिल्म रुस्तको प्रतिक्षा धेरै नै बेसब्रीले गरिरेका थिए । भनिएको छ की फिल्म
फिल्म “एमएस धोनी” को टेलर रिलिज
भारतीय क्रिकेटर महेन्द्र सिंह धोनी (एम एस धोनी) लाई नचिन्ने शायद धेरै कम होलान् । धोनीके जीवनसंग आबद्ध कथामा आधारित फिल्म एम एस धोनी छिटटै सिनेमामा आउने भएको छ । “एम एस धोनी” – द अनटोल्ड स्टोरी को लािग ट्रेलर रिलिज गरिएको छ । फिल्ममा धोनीको
यो दिन रिलिज हुनेछ “बाहुबलि–२” द कन्कलुजन
बर्ष २०१५ को सबभन्दा सफल र ब्लाक बास्टर फिल्म “बाहुबली” को सिक्कवल “बाहुबली–२” द कन्क्लुजन को जो कोही पनि बेस्रबरिले प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छौ की भारतीय फिल्मको सुचीमा मोस्ट वान्टेड र मोस्त अपडेटेड फिल्म
एउटै दृश्य (वान सट)मा खिचिएका दुई नेपाली चलचित्र ‘जालो’ र ‘जालो रिटन्र्स’ एकैसाथ तयार हुने भएका छन् । विश्वमै पहिलो पटक यो किसिमले चलचित्र बन्न लागेको हुनाले यस कार्यलाई ‘गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्ड’मा दर्ता गर्न लागिएको आज यहाँ आयोजित
अजयसंग उनको छोरीको फोटो भाइरल
वलिवुड सुपर स्टार अभिनेता अजय देवगनको आफनो छोरीसंगको फोटो समाजिक सञ्जालहरुमा यतिबेला भाइरल भएको छ । अजयले लन्डन ईण्डियन फिल्म फेस्टिवलको रेड कार्पेटमा आफनो छोरी नायसासंग एकअर्काको हात समातेर उत्रेका थिए । त्यस फेस्टिवलमा
सलमानको “बालात्कृत महिला” कमेन्टमा अनुष्काको जवाफ
वलिवुड फिल्म अभिनेत्री र वोक्स अफिसमा धमाल मच्चाइरहेका सलमान खानको फिल्म सुन्तानकी अभिनेत्री अनुष्का शर्माले सलमान खानको बालात्कृत महिला कमेन्ट उपर आफनो जवाफ फर्काएकी छिन् । उनले सलमानको उक्त कमेन्टलाई ईसेंसिटिव बताएकी छिन् । अनुष्का अनुसार
नाईसमा घटना वलिवुडकर्मील जनाए शोक
हालै फ्रान्सको नाइस शहरमा बेस्टाइल डे को अवसरमा तमासा हेर्दै गरेको मान्छेहरुको भिडमा एक ट्रक चालकलले आफनो ट्रक छिराउने क्रममा कम्तीमा ८४ जनाको मृत्यू भएको र कयौं जना गम्भिर घाइते भएको हो । यो घटनामा बलिवुडकर्मीहरुले समाजिक सञ्जाल टवीटर
कपिलको शोमा चार चाँद लगाउने देबिना बनर्जी
टि.भि. जगतका सुपरस्टार एवम् अति चर्चित हास्य कलाकार कपिल शर्माद्धारा संचालित “द कपिल शर्मा शो” मा चार चाँद लगाउन अभिनेत्री एवम् सुन्दरी देबिना बनर्जी आउने भएकी छिन् । कपिलको शो मा खासअभिनेत्री मानिएको देबिनालाई दर्शक र कपिल टिमले प्रतीक्षा